မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: ကော်ဖီဆိုင်ဟာ အေးစက်နေတယ်
ခြေလှမ်းချချလိုက်ချင်းမှာပဲ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ ပါးစပ်ဖျားက လာသောအသံနဲ့ နှုတ်ဆက်ခံရတယ်။ ကိုယ်လဲ ၀တ်ကျေတန်းကျေ ပြန်ပြုံးပြလိုက်ရတယ်။အပြုံးတုတွေ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ အဲ့လိုပဲ နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးတတ်လာတာလဲ သိပ်မကြာသေးဘူး။..။အပြုံးတုတွေကိုတော့ တာရှည်မထားချင်ဘူး။
ဒါပေသည့်..တသက်လုံးတော့ နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးချင်မိပြန်တယ်။အဲ့ဒါ မတရားဘူးလား။ မတရားဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမတရားတာလဲ ..ကိုယ်တိုင်ပဲလား...။ အလွန်တရာ စဉ်းစားတတ်သောအကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့လဲ ကြိုးစား ရဦးမယ်။ကိုယ်မလုပ်ချင်လို့ နောက်ဖက်ကို နဲနဲလေးစီ တွန်းပို့ထားတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာ.. စဉ်းစားလွန်းတာကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ ကိစ္စလဲပါတယ်။ အင်း အခုကိုပဲ စဉ်းစားနေမိတာပါလား..။ ခက်ပါပြီ..။
မင်္ဂလာနံနံခင်းပါလို့ နှုတ်ဆက်သူဆီမှာ ကော်ဖီတခွက်ကို အကြွေစေ့တချို့နဲ့လဲပြီး တောင်းလိုက်တယ်။ သူက ကြည်ကြည်သာသာပဲ ကော်ဖီပူပူတခွက်ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ပေးလာတယ်။ ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ..။ နင်ရောပဲ လို့ ပြန်ပြောဖြစ်သေးလား၊မပြောဖြစ်ဘူးလား မမှတ်မိတော့လို့ ပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။စိတ်ထဲမှ မလာဘဲ၊မပါဘဲ၊ရင်ဘတ်ထဲက မပါဘဲ လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကို ရပ်ထားချင်တယ်။
စာရေးချင်တဲ့စိတ်ပဲ ရှိပြီး စာမရေးနိုင်ဘူး။ရေးပြီးသားတချို့ကိုလဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် ပြန်မဖတ်ချင်ဘူး။ သူများကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့ ပြောဖို့ဆိုတာ ဝေးရောပေါ့..။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် လိုပြောရရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အဖျားရှူးရော... ပေါ့..။ ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး။မဆိုင်တာတွေကို ဆိုင်သလိုတွေလုပ်ပြီး တောင်စဉ်ရေမရ...စဉ်းစားနေမိတယ်။
တင့်တင့်ထွန်းလို ကလေးအတွေးပေါ့..။လွတ်လပ်တဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင် ဖြစ်ချင်မိတယ်။ငှက်ကလေးသာ ဖြစ်ရင် ကိုယ်သွားလိုရာ သွားနိုင်မယ်။ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်း၊ချစ်သူ၊မိဘ တွေကလဲ ခုလို ငဲ့ကွက်စရာ၊တခုခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားငဲ့ညာနေစရာလိုတဲ့ လူတွေ ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ..။ သူတို့လဲ ငှက်ကလေးတွေ ပဲပေါ့.။ငှက်ကလေး ကိုယ်က ကိုယ့်ငှက်ချစ်သူလေးကိုခေါ်သွားပြီး ခပ်ဝေးဝေး တနေရာကို ပျံသွားမယ်။ သွား....ရောက်ချင်ရာသာ ရောက်စေတော့...။ဘယ်သူ့မှ လူထင်စရာစရာမလိုတော့ဘူး..။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ လူထင်စရာမလိုတော့ဘူး။ အင်းလေ..ငှက်ကလေးဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့.. ဒါတွေ ဘာအရေး ဟုတ်တော့မလဲ..။
ကော်ဖီပူပူကို ဘန်း ပြားပြားလေးပေါ်တင်ပြီး ထိုင်နေကျ နှစ်ယောက်ထိုင် စားပွဲလေးဆီလျှောက်လာတယ်။ ကိုယ်ကသာ တယောက်ထဲ..။ဒါပေမယ့် ကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ အရင်အတိုင်းပဲ။
စိတ်မနှံ့ဘူးလို့ ယူဆရတဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်ငယ်တယောက်၊အဘွားအိုပေါက်စ တယောက်က ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ ၂ဦးရဲ့ မတူညီတဲ့ဘာသာစကားကိုဘေးချပြီး တူညီတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ အချေအတင် ငြင်းခုံနေတယ်။ တော်သေးတယ်။သူတို့ တူညီတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ စကားပြောနေလို့ ကိုယ်နားထောင်လို့ရတာ။ကော်ဖီဆိုင်က ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းထက် အော်ကျယ်ဟစ်ကျယ်ပြောနေတဲ့ သူတို့စကားတွေက ပိုလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း တယ်။
သူတို့အဲ့လိုပဲ နေ့တိုင်းပြောကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့ ဘာသာစကားက ကိုယ်နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကို ကိုယ်မသိပါဘူး။ဘာလို့မသိလဲဆို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာက သူတို့စကားရဲ့အစမှာတုန်းက ကိုယ်က ကော်ဖီဆိုင်ထဲကို မရောက်သေးဘူး။သူတို့စကားအစကို မမှီလိုက်သေးလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်..။အဲ့လိုတော့ ထင်တာပဲ..။အင်း အဲ့လိုတော့လဲ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ.။ ပြောနေပုံတွေကတော့ မြောက်ကိုရီးယားလိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေအကြောင်း ပြောနေသလိုပါပဲ။
ကိုယ့်နားထဲ ရောက်ရောက်လာတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာ"နင်မသိဘူးလား."."နင်မသိဘူးလား" ဆိုတာတွေပဲ။ သူတို့ ၂ ယောက်က တယောက်ကိုတယောက် ဒီကိစ္စလေးတောင် မသိဘူးလို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် နင်မသိဘူးလားလို့ မေးနေတာ..။ တကယ်တော့ မသိတာက သူတို့နှစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့စကားဝိုင်းထဲ အဝေးကနေ မေးထောက်ငေးနေတဲ့ ကိုယ်ပါ ဆိုတာ.. သွားပြောလိုက်ရမှာ..။
ဒီလိုပါပဲ..အေးစက်နေတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကနေ နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက် အကြာမှာ ကိုယ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ခြေထောက်တွေက.... လေးလံလို့....။
(မှတ်ချက်...။တီတီ ပွမ်ပွမ် အသံပေးပြီး ကိုယ်ပဲ ကျော်တက်လိုက်ပါတယ်။ နှစ်ခြောက်ဆယ် ဂရံဆွဲထားသော ဘလော့များကို ကျော်တက်လိုက်ပါတယ်.. )
posted by mirror time 11:30 AM
14 Responses to “ကော်ဖီဆိုင်ဟာ အေးစက်နေတယ်”
ကျနော် ကတော့ အမြဲ ဆယ့်ခြောက်နှစ်
Love ur style of writing!
like like (two thumbs up):)
နေ့ သစ် said...
လွမ်းတယ် ဆိုတာက လွဲလို့ 
တစ်ယောက်ကလည်း ကဗျာနဲ့ လက်ပူတိုက်နေတယ်....။
ကလုတ် ကလက် ကလုတ် ကလက် ( မြင်းလှည်း ) နဲ့ ကျော်တတ်ပါတယ် ကားက ရထားခ မရှိလို့း)
ကော်ဖီ နဲ့ အဲဒီ့အတွေးတွေပေါင်းလိုက်တော့ ကာလာစုံသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ကော်ဖီပူပူလေးဆိုရင်တော့ ပိုအရောင်စုံလာမယ်ထင်တယ်။
အတွေးတွေ လှတယ် မကြေးမုံ....
ထူးထွေအံ့ရာ .. ရေးနည်းမြန်တယ်
ကောင်းတယ် .. မောတယ်
မတိဘူးလား မတိဘူးလား မတိရကောင်းလား
နားလည်ပါတယ်နော် ။ နားလည်ရင်ကော်ကော်တိုက်
ဆယ့်ခြောက်နှစ် အမည်မသိ..း))
Jr>> မြန်ဆန်လာတာကတော့ ဟုတ်ပါဘီ။ တိုးတက် ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးတဲ့ ကိစ္စ..။ အဲ့ဒါ ခုရှင်း..။အရင်က နိမ့်ကျတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။ခများ ဆိုလိုရင်းက..း)
Myue Myue .. ကျေးဇူးပါ..။
သူလိုရာတွေပဲ ဆွဲတွေးနေတဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုနေ့သစ်ကိုလဲ ကျေးဇူးပါရှင့်..း))
ကိုကဗျာဆရာ.. ဒလိုပေါ့..ဒလိုလုပ်လိုက်လို့ ဒလို ကဗျာ ၂ ပုဒ်ဖတ်ရပြီလေ ..ခု..
မောင်မျိုးရေ့.. ဘာနဲ့ ကျော်ကျော် ဟာ..။း)
ကို/မ အမည်မသိ..း)) ကော်ဖီကတော့ ကော်ဖီရောင်ပဲဗျ။ တခြားတော့သိတော့ဘူး ။း))
ကို LBး))
ကဗျာဦး.. ရှင်တို့ ပန်းချီဆရာတွေ အဲ့လိုပဲ ကော်ကော် ကော်ကော်နဲ့ ပြောတတ်ကြသလား??
း) အကြွေးမှတ်ထားပါ။ ပြန်လာတော့ မြရိပ်မှာ တိုက်ပါ့မယ်။း))
အခုဆောင်းပါးနဲ့ တိုက်ရိုက်တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အနှောင့်အယှက်ပေးမိရင် ခွှင့်လွှတ်ပါလို့ ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အနောက်ဖက်မှာ ပြည်သူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးကို ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပါးမှု၊ ရောဂါရရှိမှုနဲ့ သေကျေတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ depopulation လို့ခေါ်တဲ့ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စကို မြန်မာတွေ သတိထားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ယူဆမိပါတယ်။ လောဘကြီး.. အတ္တကြီးနေတဲ့ စီးပွားရေးသမားနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေစုပေါင်းပြီး လူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သတ်ဖို့ကြံစည်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ Bill Gates လိုသူဌေးကြီးဟာ ကျန်းမာရေးစံနစ်ကို အသုံးပြုပြီး လူတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ လူသိရှင်ကြား ပြောကြားနေပါပြီ။ အောက်ဘက်မှာတော့ သူပြောခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကို အထောက်အထားအဖြစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကော်မန့်တွေကိုဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့နော်....မသိတာက ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာ ....။ ရင်ဘတ်ချင်းမတူတဲ့သူတွေ ကြားထဲမယ် မသိတာက ကိုယ်ဖြစ်နေခဲ့တာ...။
ဖတ်ကောင်းတယ် ညီမလေးရေ...ထုံးစံအတိုင်း အရေးအသားလေးကတော့ ပြောစရာကိုမရှိ...။